Dalxus Media Group » XOG CUSUB: Kenya oo Hal Shardi ku Xirtay Dib usoo Celinta Xiriirka Somalia & DF oo DiidayDalxus Media Group
XOG CUSUB: Kenya oo Hal Shardi ku Xirtay Dib usoo Celinta Xiriirka Somalia & DF oo Diiday
Feb 24, 2019 - jawaab
Sarkaal ka tirsan Madaxtooyada Soomaaliya ayaa Wakaalada Warqaad.com la wadaagay Xog ku saabsan Shardi Dowlada Kenya ay ku xirtay Villa Somalia kaasi oo ku aadan hadii Miiska wada hadalka ay iskugu imaanayaan.
Madaxweynaha Dalka Kenya ayaa Madaxda Soomaaliya ku wargeliyay in Wada hadal ay la yeelanayaan hadii Soomaaliya ay ka laabaneyso Dacwada Badda ee Maxkamada cadaalada aduunka.
Villa Somalia ayaa gabi ahaanba diiday inay ka laabato Kiiska dacwada si ay u hesho Dhul badeedkeeda oo Muran uu ka dhashay, iyadoo Dowlada Kenya ay cabsi ka qabto in Maxkamada Cadaalada Aduunka ay soo saarto Natiijo aan farxad galin.
Madaxweyne Uhuru Kenyaata ayaa Guddi u saaray Xiriirka Diblu maasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya oo go’ay kadib markii Dowlada Kenya ay jartay.
Dhinaca kale waxaa muuqanaya in Madaxda Kenya ay isku dayayaan in Dowlada Soomaaliya ay Hanjabaado iyo Shuruudo ku saabsan inay ka tanaasusho dhul badeedkeeda u jeedinayaan iyagoon rajo ka qabin Go’aanka Maxkamada.
Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa IGAD u gudbisay inay soo faragaliso xiisada sii xumaaneysa eek a dhaxeysa Labada Dowladood, iyadoo ay Warqad Urur Gobaleedka IGAD ay u dirtay Madaxtooyada Soomaaliya lagu cadeeyay in Soomaaliya ay diyaar u tahay wada hadal in lagu dhameeyo tabashooyinka jira.